Cannabis SPAC - Mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony - Tom Howard
Ny orinasam-bola manokana misahana ny tanjona -mba fantatra amin'ny anarana hoe SPAC- dia orinasa tsy misy fiasa ara-barotra natsangan'ny mpamatsy vola ho amin'ny tanjona tokana hanangonana vola amin'ny alàlan'ny fanolorana ho an'ny daholobe (IPO) hahazoana orinasa hafa amin'ny farany.
Raha ny tena izy, orinasa iray ahazoana tanjona manokana dia orinasa akorandriaka tsy misy hetsika ara-barotra - tsy misy vokatra ary tsy mikasa ny hivarotra na inona na inona. Raha ny marina, ny hany fananan'ny SPAC dia matetika ny vola voaangona ao amin'ny IPO azy manokana. Matetika ny SPAC dia noforonina, na notohanan'ny ekipa mpamatsy vola andrim-panjakana, matihanina avy amin'ny tontolon'ny fananana vola manokana na hedge.
Ny iray amin'ireo antony ao ambadik'ity -ary iray amin'ireo mampiavaka ny SPAC- dia rehefa manangona vola ny SPAC dia tsy fantatry ny olona mividy ao amin'ny IPO izay ho lasibatra farany ho orinasany. Izany no antony ahafahan'ny mpampiasa vola andrana miaraka amin'ny firaketana ny fahombiazana maharesy lahatra ny olona hampiasa vola. Raha ny SPACs, ny olona dia manambola vola miorina amin'ny fahatokisana ananany amin'ireo mpamatsy vola andrim-panjakana. Izany koa no antony iantsoana ny SPAC matetika ho toy ny "orinasan-tseky banga."
Inona no tanjona / tombontsoa lehibe an'ny SPAC rongony?
Nahazo laza ny SPAC tato ho ato. Raha ny marina dia iray amin'ny tantara ara-bola lehibe tamin'ny taona 2020 izy ireo, satria nanangona vola amina miliara dolara tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona. Ity karazana orinasa ity dia fitaovana iray tokony hoeritreretinao raha manandrana miditra amin'ny indostrian'ny rongony ianao noho ny tsy fisian'ny fahafaha-mitady vola amin'ny asa rongony.
Anisan'ireo tombontsoa azo avy amin'ny SPAC rongony dia ahitantsika tombony ho an'ireo mpampiasa vola ary tombony ho an'ireo orinasa lasibatra:
Tombony ho an'ny mpampiasa vola
Vola ao Escrow. Ny vola iray manontolo dia apetraka ao anaty escrow, noho izany dia esorina ny risika ambany (satria mahazo zana-bola kely izy eo am-piandrasana ny fampiraisana).
Stocks & Warranty azo amidy. Ny mpampiasa vola dia afaka mivarotra ny tahiriny sy ny warrants mandritra ny dingana vonjimaika eo am-piandrasana ny fampiraisana. Azonao atao ny mampiasa an'io amin'ny tombotsoanao raha fantatrao ny fomba filalaovanao ny karatrao mba hamokarana vokatra tsara
Famerana ny fotoana. Ao amin'ny SPAC dia misy fetr'andro foana, ka terena ny ekipa SPAC hahita tanjona kendrena ao anatin'ny fe-potoana voatondro. Izany dia manome toky ny mpampiasa vola fa raha tsy nifanarahana mihitsy ny fifanarahana teo amin'ny fitantanana sy ny mpampiasa vola dia averina ny vola voalohany.
Fampidirana lehibe kokoa. A SPAC dia mamela ny fidiran'ny mpampiasa vola bebe kokoa amin'ny fampiasam-bola. Ny mpampiasa vola SPAC dia tsy mifidy ny fifampiraharahana fa miala amin'ny fotoana mety kendrena ary mahazo famerenam-bola.
Tombony ho an'ireo orinasa kendrena
Haingana sy mora vidy. Ny tanjona farany amin'ny SPAC dia ny fampitambarana, ary ny fanakambanana miverimberina dia saika mora vidy kokoa sy haingana kokoa noho ny IPO ary ny SPAC dia manana tombony lehibe kokoa noho ny fampivondronana nentim-paharazana satria matetika tsy ilaina ny fifampidinihana amin'ireo mpampanoratra.
Tsy misy risika tsy fahombiazan'ny IPO. Ny risika amin'ny tsy fahombiazana amin'ny fampiakarana ny renivohitra amin'ny alàlan'ny mpampiasa vola andrim-panjakana na fanovana ny vidin'ny tolotra dia voafafa avokoa satria vita izany rehefa angonina ny volan'ny SPAC ary apetraka amin'ny fitazonana ilay fiara fampiasam-bola.
Fitantanana fahalalana. Amin'ny fampifangaroana SPAC, ny ekipa mpitantana dia mitazona olona farafaharatsiny farafaharatsiny mba hanana andraikitra mavitrika ao anatin'ny orinasa na amin'ny solaitrabe ho mpanolo-tsaina lehibe
Tsy misy tokonam-baravarana IPO. Orinasa maro no mety tsy mahafeno fepetra amin'ny IPO amin'ny lafiny nentim-paharazana. Amin'io lafiny io, ny SPACs dia manolo-tena safidy tsara ho an'ireo orinasa manana vinavina mety hitombo lehibe izay tsy afaka manapaka.
Manana vola ny SPACs. Tsy toy ny ankamaroan'ny orinasa akorandriaka tsy mahavita azy, SPAC dia mazàna manana vola izay manampy amin'ny famoronana fankasitrahana sy fanomezana lanja ny renivohitra eo noho eo amin'ny fifanakalozana.
Tsy mbola nisy SPAC manodidina ny tantara raha ny tantara. Izay mitsitsy fotoana sy vola ho an'ny antoko rehetra tafiditra ao.
Ahoana no ahafahanao mamorona SPAC rongony?
Ny dingana hanombohana SPAC rongony dia tsy misy hafa amin'ny famoronana IPO nentim-paharazana. Araka ny nambaran'i Chris Weekes, talen'ny fitantanan-draharaha ao amin'ny vondrona tsena renivohitra ao amin'ny banky fampiasam-bola Cowen: "Misy làlana amoron-dalana izay hampiditra fivoriana iray eo amin'ny samy mpamatsy vola andrim-panjakana toy ny vola hedge sy ny volan'ny equity tsy miankina ary ny ekipa mpitantana ny SPAC liana amin'ny fanomezana.
Ny tanjona dia ny hahatonga ireo mpampiasa vola andrana hividy amin'ny tolotra, miaraka amin'ny isan-jato kely amin'ireo mpampiasa vola antsinjarany. Amin'io lafiny io, ny SPAC dia manjary mibolisatra amin'ny fahaizany mandresy lahatra ireo tompon-trano hividy ny anjarany.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ilay lohahevitra ianao dia afaka foana izany Mifandraisa aminay ary faly izahay manampy anao amin'ny ezaka ataonao.